China SEBIC futuristic obodo ọhụrụ ọhụrụ ipuiche ebikes ụlọ ọrụ na-emepụta | Funncycle
SEBIC ọdịnihu obodo ọhụrụ kachasị ọkachamara ebikes
HSD dị ike mana ọ dị obere: Ọ dị mfe ijikwa, dị mfe ịkekọrịta, dị oke nkenke ịnya, Ma ị na-agba ịnyịnya, na-echekwa ma ọ bụ na-ebugharị ya, ikuku bụ ikuku iji aka. Ọ dị mkpụmkpụ karịa igwe kwụ otu ebe mgbe mgbe, ịdị arọ ya dịkwa ka ebi ebi.
Ịnye ọkụ Batrị Lithium
Akụkụ ụkwụ 26 ″
Moto Brushless, 36V 250W N'azụ Motor
Materialba Ihe Alloy Aluminium
Max Speed <30km / h, 25KM / H ma ọ bụ karịa
Ogo kwa Ike 31 - 60 km
Aha Akara SEBIC
Nọmba nlereanya BEF-SC26RM
Ogologo ikike ikike njem Otu Oche
Ụba 26 * 1.75 ″ aluminom alloy 6061, TIG welded
Ndụdụ 26 * 1.75 ″, ígwè, TIG welded
Breeki PROMAX V Breeki
Taya INNOVA 26 * 1.75 ″ A / V Black
Gear Ntọala 7speed
Batrị 36V 7.5AH, Lithium Batrị, na 2A chaja-SANS
Ngosipụta Ngosipụta LCD 5-nzọụkwụ.Power / 6KM na-amalite
Iche 30KM + maka ụgwọ ọ bụla
A na-enye Combo Set 0
Na-abịa ọrụ ngwa ngwa ma zuru ike na Ultimate SC26. Ihe ngosi di omimi nke oge a tinyere igwe komputa na batrị na enye ndi Gazelle Ultimate SC26 ohere di egwu ma di nma. Ogwe aluminom dị ezigbo ike, nke sụgharịrị ịbụ njikwa egwuregwu na ịrụ ọrụ kacha mma. Na mgbakwunye na akụrụngwa dị elu, enweela nkasi obi dị elu site na iji taya na-eguzogide mgbapu, ergonomic handlebar grips, na nkwonkwo nkwusioru.
- Nkasi obi ma egwuregwu egwuregwu na enyemaka dị ike ruo 28 mph.
- Ọkwa nkasi obi dị elu n'okporo ụzọ na-adịghị mma maka ekele a na-agbachi n'ihu ndụdụ.
- Ezumike ezumike tinyere arụmọrụ dị ike pụtara na ọ dịghị njem dị anya.
- Nhazi, mwekota, na nkasi obi: Ultimate SC26 Speed ​​nwere ya niile.
Nke gara aga: SEBIC ọkụ ọhụrụ na-atọ ụtọ 20 nke anụ ọhịa mpịachi igwe eletriki igwe eletriki
Osote: SEBIC High power nwaanyị ụzọ ebike
E Bike Okporo .zọ
Okporo ụzọ Bike